- World Environment Day, 5ta Juun 2003
Isla sanadkaas 1972 waxaa Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ka soo baxay go'aanno dhowr ah oo degaanka ku wajahan: sida go'aankii lagu aasaasay Hey'adda Qaramada Midoobay u qaabisan Barnaamijka Degaanka 'United Nations Environment Programme (UNEP)' oo ay xarunteedu tahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaa kaloo la go'aamiyey in sanad walba bisha Juun 5-teeda loo aqoonsado Maalinta Degaanka Adduunka. Waa maalin caalami ah oo adduunka oo idil laga xuso, loogana hadlo qiimaha degaanka uu leeyahay iyo arrimaha la xiriira degaanka dunida. Sanadkan 2003 waxaa la doortay in xoogga la saaro ka hadalka arrimaha dhinaca biyaha oo ah qodob muhiim ah oo weliba loogu magacdaray sanadkan 2003-da Sanadkii Biyaha. Degaanka Dalkeena ee sii xumaanaaya.